Umjondolo ❤️- Umkhempi omncane omuhle wama-1950
Ikhempu encane enhle yama-1950 etholakala ngaphandle nje kwe-magnolia springs AL. Ukushayela okufushane ukuya emabhishi amahle e-gulf (13 miles)
Le camper encane isendaweni yangasese. Ayikho epaki ye-rv. Ungakwazi ukuhlala ngaphandle futhi ujabulele ukushona kwelanga okuhle. Indawo ethulile.
Imizuzu emi-5 ukusuka emfuleni i-magnolia springs
Imizuzu eyi-10 ukuya ezitolo nasezindaweni zokudlela nasezindaweni ezikhangayo njengepaki yokuzijabulisa ye-OWA!
Indawo yethu ingaphandle nje kwedolobhana kodwa isaseduze ngokwanele ukuthi ingabi yinto ephazamisayo. Sijabulela ukushona kwelanga okumangalisayo. Sinezilungiselelo eziningi zezwe nakuba sikumakhilomitha angu-13 kuphela ukusuka e-Gulf of Mexico futhi sizungezwe indawo engomahambanendlwana. Sicela uqaphele ukuthi ungase uhlangane nabanye abagxekayo endaweni yethu. Sinezinja ezimbalwa, ikati likavulandi, inkomo, imbuzi nengulube. ZONKE izilwane zibiyelwe futhi azilona uhlupho kuwe. Futhi sinezingane ezi-4 ezithanda ukudlala ezindaweni ezisemaphandleni lapho isimo sezulu sisihle. Akekho owake wakhala ngomsindo.
Sihlala endaweni futhi sifinyeleleka kalula. Uzoba nobumfihlo obuphelele. Singase sihlangane singena siphuma kodwa esikhathini esiningi ngiyazama ukuthi nginganihluphi.
Ngicela uqonde ukuthi umjondolo wakhiwa ngo-1950, amathambo kanye neningi langaphakathi kungokwangempela futhi ngingathanda ukugcina unjalo isikhathi eside ngangokunokwenzeka. Uma kuphakama izinkinga zesondlo ngesikhathi sokuhlala kwakho ngicela ungazise ngokushesha ukuze sikwazi ukuzixazulula.
Kukhona ichibi endaweni okungeyona eyokusetshenziswa izivakashi kanye nobhavu oshisayo. Sicela ukuthi ugweme lezo zindawo (ezikwelinye icala lendawo ukusuka kukamu)
Ungalala isihambeli esingafinyelela kwezi-4 uma ufaka usofa.
Sicela ukuthi ubeke ingubo ngaphansi kwanoma yiziphi izilwane ezifuywayo ezingase zithole ifenisha. Sicela ulahle izilwane ezifuywayo ngaphambi kokuhlala kwakho. Ngokuhlala isikhathi eside ngaphezu kobusuku obungu-2 nezilwane ezifuywayo ngingase ngidonse amalineni amhlophe ngiwashintshe ngifake umbala ohlukile.
Uma ufisa ukupheka esitofini sangempela ngicela ungazise ngaphambili ngoba igesi kufanele ivulwe futhi icishwe ngaphandle.
Futhi sicela uqonde ukuthi le nkambi inezindawo ezithile ezingaba qinile noma zingakhululeki kumuntu ongusayizi omkhulu. Ngizame konke okusemandleni ami ukuqopha ezithombeni zezindawo ezingase zibhekwe “eziqinile” Sicela ubuyekeze ngokucophelela izithombe ezisohlwini lwethu ngaphambi kokubhukha futhi uqinisekise ukuthi umjondolo ukufanele. :)
Isevisi yeselula ingaba nebala kanye nezinti ze-tv.
Ngeshwa asibona abantu abakhubazekile. Nakuba mina nomyeni wami sizokujabulela ukusiza noma kunjalo njengoba singakwazi.
Sithemba ngobuqotho ukuthi uzokujabulela ukuhlala kwakho emjondolo wothando wama-1950!